﻿﻿	ရေမြှုပ် | Find My Method
လိင်မဆက်ဆံခင် ၂၄နာရီထိ ထည့်ထားနိုင်တယ်
ထိရောက်မှု – ရေမြှုပ်ဟာ အထူးသဖြင့် ခလေးရပြီးပါက အထိရောက်ဆုံးနည်းမဟုတ်ပါ၊ ပုံမှန်အသုံးမှာ လူအယောက် ၁၀၀မှာ ၇၆ ကနေ ၈၈ယောက်သာ ကိုယ်ဝန်ကို တားဆီးဖို့ စီမံနိုင်ပါမယ်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ – ယားယံတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်
အားထုတ်ရမှု- မြင့်မား — လိင်ဆက်ဆံတိုင်း ထည့်ပေးရပါမယ်
မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ပေးသော ရေမြှုပ်များ အကျဉ်းချုပ်
ရေမြှုပ်ဟာ အဖြူရောင်ပလပ်စတစ်အမြှုပ်ဝိုင်းစလေး ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့မှာတဖက်ချိုင့်နေပြီး နိုင်လွန်ကွင်းတစ်စ ထိပ်မှာ ပတ်ထားပါတယ်။ ထောင့်ဖြတ် ၅စင်တီမီတာရှိပြီး လိင်မဆက်မံမှီ ယောနိထဲ ထည့်ထားပေးရပါတယ်။ ရေမြှုပ်က နည်းနှစ်လမ်းနဲ့အလုပ်လုပ်တာပါ – ၎င်းက သုတ်ပိုးကိုသားအိမ်ဆီမရောက်အောင်သားအိမ်ခေါင်းမှာတားထားပြီး သုတ်ပိုးသေဆေးကိုလည်း တောက်လျောက်ထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်ရလာလဲ ကိစ္စမရှိဘူးဆိုရင် ရွေးကောင်းစရာပါ။ လူတော်တော်များများ ရေမြှုပ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မသုံးတတ်ကြပါ။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသမီးတွေလည်း မကြာခဏ ကိုယ်ဝန်ရကြပါရော။ သင် ကိုယ်ဝန်မရချင်ဘူးဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် ကလေးရှိပြီးဖြစ်ရင် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုကို စဥ်စားပါ။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အဆင်ပြေပါတယ်။ သင့်လက်ချောင်းများကို သင့်ကိုယ်ထဲထည့်ရန်အဆင်မပြေပါက ရေမြှုပ်က အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ခွင့်မဟုတ်ပါ။ ရာသီသွေးစုပ်သောတန်ပွန်တောင့်လေးထည့်ရသလိုတူပါတယ်။ ၎င်းကိုလုပ်နိုင်လျှင် ရေမြှုပ်ကိုလည်း ကိုင်တွယ်နိုင်မှာပါ။
ဒါဟာစည်းကမ်းလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံတိုင်းမှာ ရေမြှုပ်ကိုထည့်ဖို့ရာ သတိရရပါမယ်။ မိမိကိုယ်ကိုစည်းကမ်း နှင့် အစီအစဥ်တကျရှိဖို့ အတော်လိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အနည်းဆုံး လိုချင်ရင် ကိုယ်နဲ့တပါတည်း သယ်‌ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဓါတ်မတည့်မှုများ သင်ဟာ ဆာလဖာဆေးများ၊ polyurethane (သို့) သုတ်ပိုးသေဆေးတို့ကို မတည့်ပါက ရေမြှုပ်ကို မသုံးသင့်ပါ။
ကိုယ်ဝန်အတွက်မေးစရာ။ ရေမြှုပ်မှာ ဟိုမုန်းမပါတာကြောင့် သင် သုံးစွဲတာရပ်ပြီးတာနဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ရေမြှုပ်သုံးစွဲတာရပ်ပြီး ကိုယ်ဝန်မဆောင်ချင်သေးရင် နောက်နည်းလမ်းတစ်ခုခုနဲ့ သင့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ပါ။
လိင်မဆက်ဆံမှီ ၂၄နာရီထိ ရေမြှုပ်ကို ထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးတတ်ဖို့အလေ့အကျင့်အတော်လိုတဲ့အတွက် ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေကို လိုက်နာပါ။
လက်ကိုဆပ်ပြာနဲ့ရေနှင့် ဆေးကြောပါ။ ၎င်းတို့ကို လေဖြင့် ခြောက်ပါစေ။
မထည့်ခင်မှာ ရေမြှုပ်ကို ရေသန့် အနည်းဆုံး ၃၀မီလီလီတာဖြင့် စိုစွတ်နေပါစေ။
ရေမြှုပ်ကို ညင်ညင်သာသာညှစ်ပေးပြီး သုတ်ပိုးသေဆေးကို လှုံ့ဆော်ပေးပါ။
အခွက်ရှိရာဘက်ကို အပေါ်ထားပြီး ရေမြှုပ်ကို အပေါ်ဖက် တဝက်ခေါက်ပါ။
ယောနိထဲသို့ လက်ချောင်းဝင်နိုင်သလောက် ရေမြှုပ်ကို လျောထဲ့ပါ။
ရေမြှုပ်ဟာ လက်လွှတ်တဲ့အခါ သူ့အလိုလို အခေါက်ပြေပြီး သားအိမ်ခေါင်းကို ဖုံးထားပါလိမ့်မယ်။
လက်ချောင်းကို ရေမြှုပ်ရဲ့အနားပတ်လည်လျောကြည့်ပြီး နေရာတကျရှိအောင်လုပ်ပါ။ ရေမြှုပ်ရဲ့အောက်ဖက်က နိုင်လွန်ကွင်းလေးကို စမ်းမိနိုင်ပါတယ်။
ရေမြှုပ်ကို တစ်ခါတည်းသာ ထည့်သွင်းသင့်ပါတယ်။ သင့်အတွင်း သုံးပြီးသားရေမြှုပ်ကို ပြန်မသုံးပါနဲ့။ ၎င်းအထဲရှိနေတဲ့အခါ သင်ကြိုက်သလောက် အခါခါ လိင်ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်။
အဲဒါအထဲမှာ ရှိပြီးဆိုတာနဲ့ သင်လိင်ဆက်ဆံဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ။
လိင်ဆက်ဆံပြီး အနည်းဆုံး ၆ နာရီကြာအောင် ထားရှိပါ။
လက်ကို ရေနဲ့ဆပ်ပြာနဲ့ ဆေးကြောပါ။
လက်ချောင်းကို ယောနိထဲထဲ့ပြီး ကြိုးကွင်းလေးကို စမ်းကြည့်ပါ။
ကြိုးကွင်းကိုရတာနဲ့ ရေမြှုပ်ကို ဖြည်းဖြည်း ညင်ညင်သာသာ ဆွဲထုတ်ပါ။
ရေမြှုပ်ကို အမှိုက်ပုံးထဲ ပစ်လိုက်ပါ။ ခလေးများ တိရိစ္ဆာန်များအဝေးမှာ ထားပါ။
သုတ်ပိုးသေဆေးကို လှုံ့ဆော်ပေးရန် ရေမြှုပ်ကို လုံးလုံးလျားလျား စိုစွတ်နေဖို့ လိုပါမည်။ ၎င်းကို ရေဝင်မျှသွားအောင် ညှစ်‌ပေးပါ။
၎င်းအထဲရှိနေတဲ့အခါ သင်ကြိုက်သလောက်အခါခါ လိင်ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်
သင်ရော သင့်အဖော်ပါ ဘယ်သူမှ ရေမြှုပ်ကို မခံစားမိသင့်ပါ
အမျိုးသမီးတချို့မှာ ထည့်ရတာ ခက်ပါသတဲ့
အမျိုးသမီးအချို့ဟာ ဆာလဖာဆေးများ၊ polyurethane (သို့) သုတ်ပိုးသေဆေးတို့ကို မတည့်ပါက ရေမြှုပ်ကို မသုံးသင့်ပါ
ရေမြှုပ်ရဲ့ မအောင်မြင်တဲ့ နှုန်းဟာ အတော်ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ် ဒါဟာ သင့်မှာ ခလေးရှိပြီးသားဟုတ်မဟုတ်ပေါ်မှာ မူတည်နိုင်တယ် ကလေးမမွေးဖူးတဲ့အမျိုးသမီးများမှာ မအောင်မြင်တဲ့နှုန်းဟာ အတိအကျသုံးတဲ့အခါ ၉% ရှိပြီး လူတွေပုံမှန်သုံးတဲ့နည်းမှာ ၁၆% ရှိပါတယ်။ ကလေးရှိပြီးသား အမျိုးသမီးများမှာ မအောင်မြင်တဲ့နှုန်းဟာ အတိအကျသုံးတဲ့အခါ ၂၀% ရှိပြီး လူတွေပုံမှန်သုံးတဲ့နည်းမှာ ၃၂% ရှိပါတယ်။
ရေမြှုပ်က ထွက်ထွက်လာနေရင် ဘာလုပ်ရမလဲ ?
ဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါ – ရေမြှုပ်ကို လုံလောက်တဲ့အနက်ထိ ထည့်သွင်းခဲ့ရဲ့လားဆိုတာ စစ်ဆေးပါ။ ၎င်းဟာ သင့်သားအိမ်ခေါင်းကိုမှီသင့်ပါတယ်။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်တော့ ခြားခံနည်းလမ်းတစ်ခုခုကို ‌ရွေးချင်ရွေးပါ
အခြားနည်းလမ်းသုံးမယ်-အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံး၊ အမျိုးသမီးသုံးကွန်ဒုံး၊ diaphragmအမြှေးပြား၊ IUD၊ ကပ်ခွာပြား၊ သောက်ဆေး၊ ထိုးဆေး
ရေမြှုပ်က ယားယံလာစေရင် ဘာလုပ်ရမလဲ?
အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံး၊ အမျိုးသမီးသုံးကွန်ဒုံး၊ diaphragmအမြှေးပြား၊
ဒါမှမဟုတ် လိင်ဆက်ဆံတဲ့နေ့တိုင်းသုံးဖို့ ထိုးထည့်ဖို့မလိုတာကို စမ်းကြည့်လိုရင် IUD၊ ထိုးဆေး၊ implant၊ ကပ်ခွာပြား၊ သောက်ဆေး သုံးပါ။
ယားယံတာဟာ သုတ်ပိုသေဆေးကနေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီနှစ်မျိုးကိုခွဲထားဖို့မရတာကြောင့် တခြားနည်းလမ်းကိုပြောင်းသုံးသင့်ပါတယ်။
ခြားခံနည်းလမ်းတစ်ခုခုကိုဆက်သုံးချင်ရင်တော့ အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံး၊ အမျိုးသမီးသုံးကွန်ဒုံးကို သုံးဖို့စဥ်းစားပါ။
လိင်ဆက်ဆံတဲ့နေ့တိုင်းသုံးဖို့ မလိုတာမျိုး IUD၊ ထိုးဆေး၊ implant၊ အဝိုင်းကွင်း၊ ကပ်ခွာပြား၊ သောက်ဆေးလိုဟာကို သုံးဖို့စဥ်းစားနိုင်ပါတယ်
အခြားနည်းလမ်းသုံးမယ်-အမျိုးသားသုံးကွန်ဒုံး၊ implant၊ အမျိုးသမီးသုံးကွန်ဒုံး၊ IUD၊ ကပ်ခွာပြား၊ သောက်ဆေး ၊ အဝိုင်းကွင်း၊ ထိုးဆေး